Cameron Diaz naBenji Madden havana kuvanzira manzwiro avo kune mumwe mushure memusangano webhizimisi
January 5, 2015, nyika yakadzidza kuti mukurumbira wemhanzi Cameron Diaz akaroora mumwe muimbi Benjy Madden. Zvadaro muhurukuro pakanga paine shoko kubva kuHollywood nyota kuti akanga achibuda mafirimu kuitira kuti atange hupenyu uye agadzirira kuberekwa kwekutanga. Zvisinei, Cameron haasati ava nepamuviri, uye, achitonga nenzira iyo mutambikadzi anonyatsoenda kumisangano yebhizimisi, Diaz akasarudza kudzokera kumararamiro ehuruzhinji, uye zvichida kunyange kushanda.
Cameron naBenji havana nyadzi kuratidza manzwiro mumugwagwa
Nyeredzi dzakaroverwa zuro nepamaparazzi pavakabuda muCentury City. Zvinopikisa kuti Cameron akakokwa kumusangano pamwe nemutungamiriri, uko kusangana kwaDiaz mune ramangwana mune purojekiti yefirimu kwakakurukurwa. Ive firimu yei iyo ichave, ichigere kuzivikanwa, asi kutonga nezvakaitwa nomudzimai mushure memusangano, iye haana kufara zvikuru pamusoro pavo. Mushure mokunge Cameron naBenji vakasiya chivako, vakatanga kukumbatira uye kutsvoda pamberi pekamera yemaparazzi.
Mushure memifananidzo yacho paInternet, vazhinji vomufaro vakaona kuti Diaz akanga arasikirwa zvakanyanya. Kuchinja mumufananidzo hakukwanise kuvanza zvipfeko zvitatu-zvigadziro-jira rakagadzirwa nemucheka, jira jena uye mukomana jeans.
Sezvo mafesheni ainge ataura, Cameron akatanga kutendeuka kubva bbw kuenda kune imwe nguva mushure mekunge asarudza kutanga kushanda zvakare. Ikozvino tava kuziva nezvezvirongwa zvitatu izvo mukazikadzi anenge achida kuita: "Akaipa kwazvo mudzidzisi 2", "Agent: Century 21" uye "Bobby Sue," uye hazvisi zvose.
25 yevanyori vanonyanya kudavira mashura avo vakava vabati vezvinyorwa uye zviratidzo
Ivo vamene vakareurura: maitiro 20 anotyisa, ayo mazita anozivikanwa akaudzwa
17 nyeredzi dzine mazamu maduku, asi hazvirevi pamusoro payo!
Madden anobatsira mudzimai wake mune zvose
Cameron naBenjon vakasangana muna 2004 mumutambo we basketball. Ichokwadi, saka Diaz neni takanga tisingakwanisi kufungidzira kuti mumakore gumi iye achasangana nemunhu anozivikanwa zvishoma. Muna 2014, vakasangana zvakare nekuda kwaNicole Richie, uyo ari mudzimai waBenji munun'una wake. Mune imwe yehurukuro dzake, Madden akati mazwi aya:
"Cameron ndicho chinhu chakanakisisa chakaitika muupenyu hwangu. Ndinomuda chaizvo. Hazvina mhosva kuti zvipi zvaanoita, ndichagara ndichimutsigira. Zvakakosha kwandiri kuti Cameron anoziva uye anonzwisisa kuti nguva dzose ane rubatsiro mune hupenyu huri mandiri. "
Kate Middleton akashamisira vatevedzeri nemushumo wakanaka pamusi weSvondo service
Vincent Cassel anogara nevanasikana vake muBrazil pasina Monica Bellucci
Gigi Hadid akakumbira ruregerero mumagwaro akazaruka pamberi paMelania Trump
Mufananidzo weimba yaKylie Jenner yakava pachena
Mamirioni mapaundi kubva kuEmm Watson kutarisana nokushungurudzwa
Cannes Mutambo 2016 - vasarudzwa
Michael Kane nekuda kwemagandanga akachinja zita rake mupasipoti
Kate Hudson, Nicolas Cage nevamwe vazhinji pakambani Guns N'Roses
Jamie Mambo akashamisa munhu wose nechishambadzi chisingazivikanwi
Justin Bieber naVa Selena Gomez vakamira muukama nekuda kweamai vemuimbi
Nhoroondo yeChristine Diana
Vatapi venhau vakatsanangura inozive yeBrad Pitt ane makore 53 uye Ella Pernell ane makore 21
Muchinda Harry aiva iyo chaiyo yekurukuru vake Prince Philip
Nzira yekutongwa sei muchechi?
Pelargonium kubva kumbeu
Nzira yekusasa tatei kubva kurwere?
Derenflower - kudyara uye kutarisira
Priscilla Presley akataura nezvenyaya yakaipisisa yakapoteredza uori hwevana vazukuru vake
Lily James akaonekwa asina chimiro mukushambadzira mutsva weBurgberry
Nguo yechato nebhuruu rutsvuku
Nzira yekuendesa mwana kumusanganiswa sei?
Zvishongo zvemasimba makuru
Plasta kune kunze kwemabasa - zvinhu zvemazuva ano zvishongo zvekushongedza
Mini skirt - yakanakisa uye yakashambadza mhando
Zvepabonde munzvimbo dzisina kujairika
Ndezvipi mavitamini ari mubhanana?
Zvinyorwa zvema dolphin
Zvipfeko zvevakadzi zvekurara
Osteoporosis - kurapwa nemishonga yevanhu
Puro pie yekuAmerica